Mmekọrịta Mgbakwunye nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-eto eto na Thailand
Olee otu esi esonyere usoro mmemme anyị?
- Mbụ ị chọrọ kpọtụrụ anyị Ma nweta akaụntụ onye ọ bụla
- Mgbe ndebanye aha, ị ga-enweta koodu pụrụ iche maka ndị ahịa gị. Mgbe ire ere ọ bụla, ị nwetara ọrụ gị site na azụmahịa ahụ na onye ahịa
Gini mere m ga - eji soro ndi otu ndi otu?
- Mee ezigbo ego na anyị!
- Nweta ego ndi puru iche maka ndi ozo na ngwaahịa anyi
- Nweta ohere n'ozuzu
- Ka na-eche? Jikọọ ugbu a!